2019 – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
DAAWO VIDEO Sir La Helay Somaliland Warqad U Qortay Farmaajo Iyo Calamka In Arin Faderalka Laga Qeyb Galiyo
December 31, 2019 marqaan 7
Maamulka Soomaliland Ayaa Dowlada Faderalka Iyo Beesha Calamka U Dirtay Codsi yaab leh,Kaasi oo Noqonaya In Shirarka Dowlada Faderalka iyo Meesha Caalamka Laga Qeyb galiyo . Gar Ahaana Shirarka Dayn [Read More]
DAAWO:- Maxkamadda Ciidanka Qalabka sida oo xukuno kala duwan ku riday kudhawaad 10 Alshabaab ah.
December 31, 2019 marqaan 0
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa todoba nin oo lagu eedeeyey inay ka tirsanyihiin Al-Shabaab ku xukuntay dil toogasho ah, kadib markii maanta ay soo gaba-gabeysay dhagaysiga kiiskooda [Read More]
Banaanbax aan caadi ah oo laga iclaamiyay Gobolka Banaadir “Ujeedka Banaanbaxa iyo xilliga uu dhacayo”.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa waxaa uu iclaamiyey in Maalinta Khamiisto ah ee soo socota uu Magaalada Muqdisho ka dhaco banaanbax Balaaran oo aan loo kala harin oo ka dhaca Muqdisho. [Read More]
Degdeg:- Mooshin cusub oo loo gudbiyay Gudoonka Baarlamaanka Somalia + Mursal oo Qabtay Mooshinka
Warar hoose oo ay Heshay Marqaannews ayaa sheegaya in la diyaariyay Mooshin cusub kaasi oo si hoose loo wado isla markaana aysan ka war hayn inta badan xildhibaanada Somalia. Guddoomiyaha [Read More]
XOG:- Maxaad kala socotaa Isbahaysiga ka dhanka ah dhismaha Galmudug ee CCSharmaake ka wado Garoowe.
Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo hoggaamiyaha Ahlu-Sunna Waljamaaca Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax, ayaa la sheegay in todobaadkaan ay kulan qarsoodi ah ku yeesheen magaalada Garowe ee xarunta [Read More]
SAWIRO- Magaalo kutaal Caalamka oo mar qura isku badashay Habeen xilli Maalin ah.
Mallacoota, waa magaalo dalxiis oo ku taala gobolka Victoria ee dalak Australia, waxay 500km bari ka xigtaa magaaladda Melboune. Ku dhawaad 1,000 qof ayaa halkaas ku nool, laakiin dadkaas waa [Read More]
Diyaaradaha Mareekanka oo Duqeyntoodi sanadka 2019 xalay ku Khatimay Gobolka Bari.
Wararka ka imanaya Buuraleyda Calmadow ee Gobolka Bari ayaa sheegaya in halkaas ay duqeyn dhinaca cirka ah ka dhacday xalay. Duqeynta ayaa waxaa ay xalay fiidkii ka dhacday Degaan lagu [Read More]
SAWIRO:- Muqdisho waxaa kulan muhiim ah ku qaatay laba kamid ah Safiirada Caalamka ujooga Muqdisho.
Safiirka Imaaraadka Carabta u qaabilsan Soomaaliya Maxamed Axmed Cusmaan oo todobaadyadii la soo dhaafay ku sugnaa Magaaladda Muqdisho ayaa maanta Xarunta Safaaradda ee Muqdisho kula kulmay Safiirka Qaramada Midoobey ee [Read More]
Madaxwaynaha Dalka Cupa oo fariin muhiim ah iyo codsi udiray Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta.
Madaxweynaha Dalka Cuba, Miguel Díaz-Canel, ayaa xaqiijiyay in wadahadal qadka Taleefanka ah uu la yeeshay Madaxweynayaasha Waddamada Kenya iyo Soomaaliya. Qoraal uu ku daabacay Boggiisa Twitterka Maanta oo Talaado ah [Read More]
DAAWO:- Fanaan Maxamed BK oo isbadalay raali gelina ka bixiyay Jeesjeeskii maalin kahor uu ku hadlay.
Fanaanka Maxamed Siciid Bk ayaa Ummadda Soomaaliyeed Raali-galin ka siiyey hadal gaf ah oo ka dhacay, xilli uu ka hadlayey xaflad uu uga qayb galay London. Bk ayaa sheegay in [Read More]
SAWIRO:- Madasha xisbiyada Qaran oo bilaabay inay kulamo la qaataan Madaxda Ugu sareysa ee Dalka.
December 31, 2019 marqaan 1
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa xalay hoygiisa waxaa uu casho sharaf ugu sameeyay Hoggaanka iyo Xubnaha Madasha Xisbiyada Qaran. Kulankan ayaa [Read More]
DAAWO VIDEO:Xog Adan Ogayn Imaraadka Baaburta Weerar Fuliyey lahaa,Turkiga Ciidan Somaliya Usoo Diraya,Kooxo Imaraadka Argagixisada Soomaliya U Tageero.
December 30, 2019 marqaan 0
Barnaamijkeena Qeybtani oo Xog badan huwan waxaanu Uga Sheekayn doona Sirta Lagu Ogaadey Imaraadka Inay ka Danbeysey Weerarkii Muqdisho,Kooxda Argagixisada ee Imaraadka Tageero ee Ku Sugan Soomaaliya Sida Ay Uga [Read More]
DAAWO:- Alshabaab oo Saacado badan kadib sheegtay Masuuliyadda Xasuuqii Ex-Koontorool Afgooye.
Afhayeenka Al-Shabaab, Sheekh Cali Maxamuud Raage ayaa jeediyey kalimad muhiim ah oo uu kaga hadlayo qaraxii xooganaa ee maalin kahor ka dhacay isgoyska Ex-Control Afgooye ee magaalada Muqdisho, kaas oo [Read More]
Hay’adda nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa Goordhow sheegtay in qaraxii ka dhacay Isgoyska Ex-Koontarool Afgooye ee Magaalada Muqdisho uu qorshayntiisu lahaa Dal shisheeye. War qoraal ah oo [Read More]
Tan iyo wixii ka dambeeyay markii dadka badan lagu laayay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee maalin kahor kadhacay Caasimada gaar ahaan Isgoyska Ex-Koontorool Afgooye ayaa waxaa isa soo tarayay shakiga laga [Read More]
R/Wasaaraha Somalia Xasan Cali Kheyre oo gowr dhaw ka dagay Garoonka Diyaaradaha ee Dhuusamareeb.
Raiisal Wasaaraha Somalia Xasan Cali Kheyre ayaa Gowr dhaw gaaray magaalada Dhuusamareb ee Caasimadda Galmudug, waxaana u gelinkii dambe ee Maanta uu ka amba baxay Magaalada Muqdisho. Wafdiga R’iisal wasaaraha [Read More]
Degdeg:- Raiisal Wasaare Kheyre oo uduulay Caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa goor dhaw u amba baxay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. Kheyre ayaa intii uusan bixin waxa uu garoonka Aadan Cadde ku booqday [Read More]
SAWIRO:- R/Wasaare Kheyre oo Muqdisho ka sagootiyay Dhaawacyo loo qaaday Dalka Qatar.
Ra’iisul Wasaaraha XFS, mudane Xasan Cali Khayre iyo xubna ka tirsan guddiga gurmadka qaran ee dhawaan loo magacaabay isku dubba ridka howlaga gurmadka, ayaa maanta garoonka diyaaradaha Caalamiga ah ee Aadan Cabulle [Read More]
Kim Joung-un oo markii ugu horreysay Cabsi dareemay isagoona adkeeyay Amaanka Naftiisa iyo Dalkiisa.
Hoggaamiyaha Kuuriyada Woqooyi ayaa ku baaqay tallaabooyin “wax ku ool ah iyo la isku difaacayo ” si loo xaqiijiyo “madaxbannaanida iyo amniga” dalkiisa, sida lagu sheegay warbaahinta dawladda. Kim Jong-un [Read More]
Tuhunka Qaraxii Ex-Koontorool oo sii Kordhay “Amiirka Imaaraatka oo la ogaaday inuu bixiyay Amarka Gumaadkaasi”.
Wargays kasoo baxa dalka Turkiga ayaa daabacay in xogo ay helay ay muujinayso in qaraxii dadka badan dhibaatadu kasoo gaartay ee 28 bishaan ka dhacay Ex-Control Afgooye ay ka dambeyso [Read More]
Degdeg:- CCWasarme oo ka jawaabay Qoraalkii Nisa ee Xasuuqii Sabtidii “NISA Waxay marinhabaabinaysaa Shacabka”.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa ka hor-yimid warkii ay shaacisay Hey’adda NISA ee ku saabsanaa in dal shisheeyey uu qorsheeyay qaraxii dadka faraha badan ku dhinteen ee 28-kii [Read More]
Xildh.Fiqi oo Horay usoo noqday Madaxa Sirdoonka Somalia ayaa la yaab ku tilmaamay Qoraalkii Maanta ee Hay’adaasi.
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ah Afhayeenka Xisbiyada ku midoobay Madasha qaran ayaa dhowr su’aal ka keenay warkii maanta ka soo baxay Hey’adda Nabad sugida qaranka NISA ee ahaa in [Read More]
Degdeg:- NISA oo sheegtay in ay ogaatay in Qaraxii Sabtigi ay ka dambeeysay mid kamid ah Dalalka Carabta.
kasoo baxay waxaa lagu sheegay in dowlado Shishiiye ay ku lug leeyihiin qarixii khasaaraha badan geystay ee Maalin ka hor ka dhacay Isgoyska Ex-Koontorool Afgooye ee Magaalada muqdisho. Qoraal lagu [Read More]
Madaxweynaha Maamulka Soomaliland Ayaa Soodhaweyey Raali Galinta Madaxweyne Farmaajo,Sidoo Kale Daaha Ka Qaaday Kulankii Adis Sababa,waxaana uu kaloo Ka Hadlay Farmaajo Inuu Hargeysa Tagayo. Video
Shacabka Laascaanood Siyaableh Uga Hadlay Tagitaanka Farmaajo Ee Hargaysa